Big Data iri Kusundira Kushambadzira muReal-Nguva | Martech Zone
Big Data iri Kusundira Kushambadzira muReal-Nguva
China, Kurume 3, 2016 Mugovera, January 14, 2017 Chris Hoyt
Vatengesi vagara vachitsvaga kusvika kune vatengi vavo panguva chaiyo chaiyo - uye kuti vazviite pamberi pemakwikwi avo. Nekuuya kweInternet uye chaiyo-nguva analytics, iyo nguva yekuve yakakodzera kune vatengi vako iri kudzikira. Big Data ikozvino yave kuita kushambadzira kunyangwe nekukurumidza, kunoteerera, uye kuwanda kwehukama kupfuura nakare kose. Huwandu hweruzivo uye simba remakomputa kubva mugore, iro riri kuramba richiwanika uye risingakwanisike, zvinoreva kuti kunyangwe mabhizinesi madiki anogona kupindura kumisika mune chaiyo-nguva, kuziva zvinodiwa nevatengi vavo (pamwe vasati vaita), uye kufungidzira uye tarisira shanduko.
Chii chinonzi Chaicho-Nguva Kushambadzira?
Yechokwadi-yenguva kushambadzira inoreva kugona kusvika vatengi iko chaiko panguva yavanoda kana kupindura kune yako meseji. Izvi zvinoreva zvakare kuti iwe unogona kutaura nevatengi vako mune mamiriro echinguvana. Kushambadzira kwechinyakare kunotangira-kurongwa zvichibva pane yakanakisa-maitiro, mwaka kana pane iyo purogiramu yechiratidzo. Yechokwadi-yenguva kushambadzira zvine musoro zvakarongwa zvinoenderana nehunhu, persona uye nzvimbo yeanogamuchira. Inowanzo kuve yakasarudzika futi.
Munguva ya2013 Super Bowl, pakapera simba, Oreo akasundidzira shambadziro mumaminitsi mashoma iyo yakati "Unogona kuramba uchinge wakasviba murima."
Uyu unongova muenzaniso mumwe unofadza. Zvine simba zvakanyanya, Target inogona kushandisa maitiro ekutenga kuti aone shanduko yehupenyu uye nekupa akakosha zvigadzirwa kuderedzwa kune vatengi, kunyangwe kusvika pozotyisaona chinyorwa paChivavarira uchiziva kana vatengi vaine pamuviri). Zvakare, vatengesi vepamhepo, seAmazon, vakadzidza kutarisira kana iwe uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchishomeka pane zvigadzirwa zvinoshandiswa izvo zvinokonzeresa zviyeuchidzo zvinopihwa.
Kusvikira padiki padiki, kupisa uye kutonhodza makambani anokwanisa kushandisa nhoroondo dzekare nedata remamiriro ekunze kufanofungidzira kudiwa kunogona kubata yakanyanya kuwanda kupfuura makambani anongomirira kuti nhare dziridze, nekuti vanogadzirira zviwanikwa pamberi penguva. Maresitorendi anokwanisa kushandisa mapatani ekutenga kuti afungidzire kuti ndevapi vatengi vechikafu vanofarira panguva dzakasiyana dzegore. Iko chaiko hakuna bhizinesi risingakwanise kubatsirwa nekushandisa data kufanofungidzira, kutarisira, uye kushambadzira kune vatengi vavo munguva chaiyo.
Mujaho kune Mumwe
Kushambadzira kwagara kuri nezve huwandu hwakawanda hwevanhu uye stereotypes. Kune vanhu vazhinji kwazvo munyika, makambani haanzwe sekunge vangangosvika kuvanhu pane imwe nhanho. Kune chikamu chikuru, vanhu vakanzwisisa uye vakashivirira iyi "misika yemusika" mafungiro. Zvisinei, sezvo Big Data iri kuramba ichikura, vanhu vanotanga kutarisira kubatwa sevanhu vamwe nevamwe.
Zvingaite kunge zvinopesana, "DZIMWE dhata dzingaite sei kuti vanhu vabude pachena?" Muchokwadi, ndizvo zvinoita kuti Big Data ive nesimba. Maitiro, maitiro, zvido, uye hunhu hweumwe neumwe zviri nyore kuziva uye kunzwisisa kana iwe uine yakawanda data yekutora kubva. Nedata shoma, isu tese tinogadzirisa mavhareji. Nedata rakawanda, isu tinokwanisa kutanga kugadziridza kune yakasarudzika yeedu ega vatengi.
Mumisika inokwikwidza, mabhizimusi anogona kusangana nevatengi pane zvakaenzanisirwa munhu-mumwe-mumwe anozokunda avo vasingakwanise kuona kupfuura "avhareji mutengi." Isu tiri munhangemutange kune imwe.
YEMAHARA eBook "Kushambadzira paKukumikidza kweBhizinesi"
Kuti udzidze zvakawanda nezvekuti Big Data iri kuchinja sei kushambadzira, uye ona nyaya dzemaitiro nezvekuti vatengesi, vagadziri, uye makambani ekuchengetedza hutano arikushandisa iyo data kusimbisa kushambadzira kwavo mune chaiyo-nguva, musoro pamusoro Perscio uye kurodha yedu yemahara whitepaper.
Dhawunirodha Kushambadzira paKumhanya kweBhizinesi
Tags: big datakushambadzira kwemashoko makuruwhitepaper yemaharakushambadzira nekukurumidza kwebhizinesioreoperscio-Chaicho nguvachaiyo-nguva hombe datachaiyo-nguva kushambadziraTwitterWhitepaper
Chris ndiye Kushambadzira Director we Perscio, bhizinesi shamwari yakanangana nekugadzira Big Data mikana yevatengi vavo, uko kwaakagadzira iyo yekumaka nekutumira mameseji kubva pasi kumusoro, kubva kuchiratidzo kusvika pakutengesa fanera.
Uchishandisa WordTracker Kuvaka Wako Mubvunzo uye Mhinduro Zvemukati
25% yeEmail Kutenga kuri Kuitika pane Nhare